March 6, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 6th, 2017'
Yusra Abraar oo Maanta soo Gaartay Magaalada Muqdisho, Kadib Markii Madaxweyne Farmaajo u Yeeray (Dhagayso)
March 06, 2017 – Yusur Aadan Abraar oo mar soo noqotay guddoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta soo gaartay magaalladda Muqdisho, kadib, markii madaxweyune farmaajo uu ugu yeeray magaalada Muqdisho. Ilo-wareedyo ku dhow Xafiiska Ra’isul-wasaaraha ayaa sheegaya in Yusur Abraar safka hore kaga jirto Mas’uuliyiinta Xilalka Qaranka loo dhiibi doono, balse ma …
Dumarka Magaalada Muqdisho oo ay Murugo Horlehi la soo Deristay (VIDEO)
March 06, 2017 – Dumarka magaalada Muqdisho ayaa murugo horlehi la soo Deristay, kadib markii Arin Mucjiso ah oo hablaha uun u gaar ah lagu arkay xaafado ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Haweenka xaafada Sii Sii ee degmada Yaaqshiid ayaa warbaahinta u sheegay in dhibaato iyo jirdil uu ku hayo nin aan loo …
Haweenkii Muqdisho Lagu Weeraray (VIDEO)
Haweenka xaafada Sii Sii ee degmada Yaaqshiid ayaa warbaahinta u sheegay in dhibaato iyo jirdil uu ku hayo nin aan loo jeedin ama aan la ogeyn waxa uu yahay. Haweenka la weeraray ee la dhaawacay ayaa isugu jira gabdho yar yar iyo hablo waa weyn, waxaana Haweenkani dhamaantoodba laga waxyeeleeyay ama laga weeraray wajiga, Waxaana …
Muxuu Yuusuf Garaad ka yiri: ‘Dib u Milicsiga Mustaqbalka Xarunta Villa Somalia’ (Akhriso)
March 06, 2017 – Laga soo billaabo Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf Axmed, Guddoomiye Shariif Xasan iyo Ra’iisal Wasaare Cali Maxamed Geeddi, ku xiji Nuur-Cadde, Shiikh Shariif, Xasan Shiikh, Saacid Shirdoon, Cabdiweli Shiikh, Cumar Cabdirashiid iyo qaar kale oo Wasiirro u badan Madaxda Sare ee dalka soo martay intooda badan inta aanay xilka qaban waxay ahaayeen rag …
Soomaali Laga soo Daadgureeyay Magaalada Cadan oo ku soo Wajahan Dalka Soomaaliya (SAWIRRO)
March 06, 2017 – Safaaradda Soomaaliya ee dalka Yemen, Hay’adda Qaxootiga Qaranka Soomaaliyeed iyo Hay’addo kale oo iskaashanaya ayaa suurtageliyay in ay soo daadgureeyaan dad badan oo Soomaaliyeed oo ku go’doonsanaa magaalada ay dagaallada ka socda dalka Yemen. Qunsulka Soomaaliyeed ee Magaalada Cadan, Axmed Cabdi Xasan oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in dad badan …
Kuuriyada Waqooyi oo Maanta Markale Tijaabisay Gantaalka Ridada Dheer (VIDEO)
March 06, 2017 – Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta markale tijaabiyay gantaal aan noociisa la aqoon, kaa oo ku dhacay badda dalka Japan sida laga soo xigtay saraakiil katirsan Dowlada Kuuriyada Koonfureed. Gantaalkan ay tijaabisay Dowlada Kuuriyada Waqooyi ayaa laga riday gobolka Tongchang-ri oo ku dhaw xadka Woqooyiga Kuuriya la leedahay Shiinaha, waxaana gantaalkan la …
Tijaabadii 2-aad ee Kuuriyada Waqooyi (VIDEO)
Gantaalkan ay tijaabisay Dowlada Kuuriyada Waqooyi ayaa laga riday gobolka Tongchang-ri oo ku dhaw xadka Woqooyiga Kuuriya la leedahay Shiinaha, waxaana gantaalkan la tijaabiyay mar kale xiisad ka abuuray dowladaha dariska la ah Waqooyiga Kuuriya. Dowladaha dariska ah la ah dalka Kuuriyada waqooyi iyo Qaramada Midoobay ayaa marar badan cambaareeyay tijaabinta gantaalada ay sameyso Kuuriyada …